Ny mafana sy ny fironana any amin'ny firenena 85 dia manangana ny dia lavitra
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny mafana sy ny fironana any amin'ny firenena 85 dia manangana ny dia lavitra
Taranaka C isika rehetra dia ao amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany ary ny besinimaro mandeha. Ny Generation C no taranaka na mpitsidika aorian'ny COVID-19. Samy liana amin'ny rehetra isika fananganana.travel.
Ny hany hetsika tanora 2 herinandro eny ifotony fananganana.travel dia efa mpihaza any amin'ny firenena 85 misy mpitondra ambony amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana, ary ny mpandray anjara amin'ny habe rehetra dia miditra ao.
Tamin'ny fivorian'ny fivorian'ny fizahan-tany any Karaiba UK tamin'ny herinandro lasa teo, ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika, ny Hon. Edmund Bartlett dia nanisy marika ity famaritana Generation C vaovao ity, Fanarenana.travel naka ny Generation C ho toy ny hetsika ifotony. Rebuilding.travel dia noforonin'ny Fiaraha-miasa iraisan'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahantany ary aingam-panahy avy amin'ny Project Hope nokarakarain'ny Birao fizahantany afrikanina.
Tao anatin'ny herinandro iray ny fikambanana, anisan'izany i SKAL Iraisam-pirenena, ETOA, solontena avy amin'ny WTTC, ny Ivotoerana fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy fizahana krizy, Minisitry ny fizahantany ankehitriny sy taloha, lohan'ny birao fizahan-tany, Royal Highness avy any Arabia Saodita, lohan'ny Ivotoerana fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy fitantanana krizy, ny mpanorina ny Ivon-toerana iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fizahantany, mpitarika avy amin'ny sehatry ny fiarovana sy fiarovana, mpitantana avy amin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny, fitsangantsanganana ary fiaramanidina. Ireo olona manokana amin'ny fikarohana, ny consulting, ny PR ary ny marketing, ny oniversite ary ny famoahana vaovao dia miaraka manangana.travel.
Rebuilding.travel manana izao mpanohana ao amin'ny firenena ambanivohitra 85s. Izany dia talohan'ny nanamboarana vola dime iray ary talohan'ny namoronana rafitra mazava. Ny tontolon'ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany dia noana raha tsy maniry mafy ny hifandray, hiara-miasa ary "hanatonana saina" hitahiry ny zon'olombelona amin'ny dia.
Ny mpanorina, ny filohan'ny ICTP Juergen Steinmetz, izay sady filoha mpanorina ny Birao Afrikana fizahan-tany ary filohan'ny Travel News Group dia nilaza hoe: "Tena nanetry tena aho nahita valinteny mahafinaritra toy izany. Ny fampivondronana ireo mpitarika mamirapiratra toy izao mba handinika sy hiady hevitra momba ny hoavin'ny indostria misy antsika dia resaka ilaina ilaintsika izao. "
Rebuilding Travel dia nanao ny fivoriana Zoom virtoaly avo lenta voalohany tamin'ny alakamisy 30 aprily 2020 lasa teo
Dr. Taleb Rifai, sekretera jeneralin'ny World Tourism Organization (UNWTO) teo aloha, nanazava fa ny ezaky ny fananganana ny Project Hope any Afrika izay tarihiny koa dia ny fanarenana ny dia amin'ny dingana roa: Containment and Recovery. Ny fikojakojana dia valiny voalohany amin'ny krizy, ary ny famerenana amin'ny laoniny dia miatrika ny zava-misy amin'ny olana toy ny tsy fananan'asa sy ny fidinan'ny toekarena. Nilaza i Taleb fa tsy misy dikany ny fizahantany raha tsy eo ny dia ary misy sehatra 4 hamerenana ny fizahan-tany:
Fizahan-tany any an-toerana: Ny fanamafisana ny fizahan-tany ao an-toerana dia foto-pitsipika iray - ny mankafy ny firenenao aloha alohan'ny hangatahana ny hafa hitsidika azy.
Teknolojia nomerika: Fanitsiana amin'ny fanatrehana hetsika any an-trano amin'ny sehatra fivoriana virtoaly ary koa hetsika sosialy toy ny kaonseritra.
Fiofanana sy fanarenana: Ny fangatahana mpiasa ho amin'ny toerana niova, toy ny fanofanana mpandroso sakafo amin'ny fomba famonosana sakafo ho an'ny fanaterana.
Famelomana indray ny toekarena: Ny governemanta dia tsy maintsy mampiditra vola eo am-pelatanan'ny olona mba hanombohana ny fandaniana.
Nanampy i Dr. Rifai fa misy fepetra manokana tokony horaisina. Anisan'izany ny faritra tsy misy korona toy ny morontsiraka sy ny distrika jeografika izay nanomanan'ilay firenena handray mpitsidika izay hahatsapan'izy ireo fa milamina.
Dr. Taleb Rifai, sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha, Jordania
Alain St.Ange, ny minisitry ny fizahantany tany Seychelles teo aloha, ary ny filohan'ny fikambanana fizahantany afrikanina dia niresaka momba ny Project Hope for Africa. Nambarany fa ankoatry ny fizahan-tany any an-toerana dia tsy maintsy resahina ny fizahan-tany isam-paritra. Seychelles mino fa kely ny firenena dia hitan'izy ireo ny tampon'ny COVID-19. Ny haben'ny haben'izy ireo dia namela azy ireo hanaraka ny fivezivezen'ny olona mamela azy ireo hanampy sy hanome torohevitra amin'ny forum toy ity. Nilaza izy fa ho lasa zava-dehibe kokoa ny faritra virtoaly, ary na dia sarotra kokoa aza ny miasa dia vitany izany.
Nanambara i Steinmetz fa ny filoham-pirenena Seychelles ankehitriny dia nilaza fa vonona hanokatra ny seranam-piaramanidina izy ireo miaraka amin'ny sidina entana sy fiaramanidina tsy miankina amin'ny fahatongavan'ireo kaompaniam-pitaterana lehibe kokoa taty aoriana. Ny seranam-piaramanidina avy eo dia tokony hanome toky fa ny olona tonga dia voahodina amin'ny alàlan'ny fizahana henjana. Hatramin'ny fitsangantsanganana an-tsambo dia hanaraka azy ireo toy ny zotram-piaramanidina, miaraka amina yachts kely kokoa navela ho tonga eo amin'ireo nosy. Ny tsenan'ny fizahantany kosa dia mbola eo am-pandidiana.
Vijay Poonoosamy, Tale iraisam-pirenena sy raharaham-bahoaka ao QI Group izay monina ao Singapore, ary ny VP taloha an'ny Etihad Airways, dia nidera an'ity hetsika Rebuilding Travel ity, izay nilaza fa manan-danja lehibe amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Nilaza izy fa tsy ho izao tontolo izao - efa miaina amin'ny fomba vaovao isika. Ny zotram-piaramanidina sy sambo fitsangantsanganana no tena iharan'izany. Ny seranam-piaramanidina izay mandeha tsara dia miatrika fanamby satria ny kaompaniam-pitaterana tsy mandeha tsara dia mametraka fatiantoka amin'ny fatiantoka. Ny fanontaniana tsy maintsy valiana dia ny fomba hanampiantsika ireo zotram-piaramanidina hamolavola ny endriny ary ho velona? Ny fanamafisana ny fizahan-tany anatiny sy isam-paritra dia hampivoatra ny sehatra.
Vijay Poonoosamy, manam-pahaizana momba ny fiaramanidina VP Etihad Airways taloha, Singapore
Frank Haas, filohan'ny Marketing Management, Inc any Hawaii nilaza fa Hawaii sy toeran-kafa dia nifindra tamin'ny fizahan-tany be loatra ka hatramin'ny fanarenana fizahan-tany, ary ny fitaovana hamaliana izany dia amin'ny alàlan'ny teknolojia. Nizara izy fa ny lahatsoratra iray nosoratany, "Afaka miarina avy amin'ny lavenon'ny COVID-19 i Hawaii ho tanjona kendrena?" afaka manampy hanazava ity lohahevitra ity. Nilaza i Frank ho firenena nosy, ny ankamaroan'ny olona dia miditra amin'ny alàlan'ny rivotra izay mitondra ny fahafahan'ny mpitsidika mitondra ilay virus. Zava-dehibe ny teknolojia amin'ny famaliana ny fomba fitiliantsika ireo tonga. Ho an'i Hawaii izay ny fizahan-tany dia 17% amin'ny harin-karena faobe, ny fampiasana teknolojia hitantanana ny fizahantany no ho ara-dalàna.
Frank Haas, Mpanolo-tsaina momba ny fizahan-tany, Hawaii, Etazonia
Pankaj Pradhanan, talen'ny fitsangantsanganana sy fizahan-tany efa-taona ary mpikambana ao amin'ny Toastmasters, nizara fa tamin'ny 2015, ny fireneny dia niharan'ny trangana horohoron-tany lehibe. Fijaliana lehibe io, ary ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany dia nijery ny taona 2020 ho fanombohan'ny fiandohana vaovao. Fivoriana virtoaly iray notontosain'ny Toastmasters izay nisy mpandray anjara 173 avy amin'ny firenena 14. Ny vokatr'io fivoriana io dia ity hafatra ity: Tsy hijanona izahay ary tsy ho kivy. Tsy maintsy mifindra amin'ny fifaninanana mankany amin'ny fiaraha-miasa isika, amin'ny ara-dalàna vaovao mankany amin'ny ara-dalàna maharitra. Nilaza i Frank fa i Nepal dia miasa mba hanao fizahan-tany ho an'ny rehetra, tsy ny tsena nentim-paharazan'ny fireneny ihany no mifantoka amin'ny fizahan-tany fizahan-tany. Nilaza izy fa tsy maintsy mampiasa vola amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny tanjon'ny fizahan-tany izy ireo mba hahatongavan'ny tsirairay hitsidika azy, ary hijanona eo ambony ny fizahan-tany.
Pankaj Pradhananga, Four Seasons Travel, ary consultant Nepal fizahantany
Dr. Peter Tarlow, filohan'ny Safertourism nizara fa izy dia miaro amin'ny fizahan-tany fizahan-tany, fiarovana, fahasalamana ary fahasalamana, ary ity fandraisana andraikitra ity dia hiara-hiasa amintsika rehetra hahatratrarana antoka izay hiarahan'ny fiarovana, ny filaminana ary ny fampandrosoana ara-toekarena. Na izany aza, tsy hitsangana ny fizahantany rehefa matahotra ny olona. Rehefa matahotra ny olona dia tsy handehandeha. Nilaza izy fa mila famaritana mahazatra izahay, ka samy mahatakatra ny angon-drakitra ny toe-javatra. Ny indostrian'ny fizahantany dia nilaza matetika fa ny tokony hataontsika dia ny miala amin'ny fanomezana ka manome. Fantatray ny serivisy sy ny serivisy ho an'ny mpanjifa, ary mila mamaly toekarena isika izao.
Amin'ny fitantanana risika, tsy azontsika atao ny mampanantena mihoatra ny zavatra azontsika omena. Tsy hahatratra 100% ny fiarovana sy ny fiarovana isika, fa afaka manao dingana haingana. Ny teknolojia dia afaka mandeha ihany hatreto. Ny fitiavana mandray vahiny dia midika ho fitandremana, ary ny fizahantany dia tsy afaka mifandray amin'ny masinina. Tokony hampiasa teknolojia isika nefa tsy hanaisotra ny maha-olombelona. Izahay dia tsy miasa amin'ny mahazatra vaovao, fa miasa amin'ny manaraka - mahazatra - ary mianatra miaina amin'ny tontolon'ny tsy fetezana. Ny fahaleovan-tena, ny fahatakarana, ny fiarovana ary ny filaminana dia mifanerasera avokoa mba hahazoana fahasalamana ara-indostrialy. Tokony hanome toky ny mpandeha amin'ny ho avy isika tsy hatahotra ny mety hisian'ny asan-dahalo any Etazonia izay vokatry ny fahantrana matetika. Misy 30 tapitrisa mahery any Etazonia izay tsy an'asa, ary tao anatin'ny 3 volana dia niala tamin'ny toekarena matanjaka isika ka hatramin'ny famonoana olona. Ny teny fandraisam-bahiny dia avy amin'ny hopitaly. Amin'ny fizahan-tany dia mikarakara ny fanahy isika amin'ny fomba fikarakaran'ny hopitaly ny vatana.
Dr. Peter Tarlow, SaferTourism.com, Texas, Etazonia
Lefteris Sergidis, tompon'ny Travelbook Group, Nanazava fa Travel Group dia ahitana hotely 150 any Afrika ary nanatri-maso ny fidinan'ny famandrihana izay ho sarotra ny hiverina. Miasa an-tserasera amin'ny alàlan'ny fantsona toy ny Expedia amin'ny zavatra hitranga izy ny ampitso. Mba hisokafan'ny trano fandraisam-bahiny dia tsy maintsy miditra ny sidina, izay mampiseho ny fomba ifandraisan'ny zava-drehetra. Misokatra ny firenena, saingy mbola tsy eo ny sidina.
Lefteris Serdiges avy amin'ny Travelbookgroup UK
Cuthbert Ncube, filohan'ny holafitry ny fizahantany afrikanina, natomboka tamin'ny filazany fa nankasitraka an'ity hetsika Rebuilding Travel ity hijoro toy ny trano fanazavana mandritra ny tafiotra COVID-19 izy. Nilaza izy fa mila mamorona fomba fijery matanjaka amin'ny varotra ho any amin'ny toerana itodiana isika hiomanana amin'ny hery rebound izay hampiray antsika ary izy ireo dia lehibe noho ny fitaomana mitazona antsika hisaraka. Nilaza i Cuthbert fa tokony horavantsika ireo rindrina ara-tsaina mampisaraka antsika.
Cuthbert Ncube, filohan'ny komity fizahan-tany afrikanina, Pretoria, Afrika atsimo
Walter Mzembi, minisitry ny raharaham-bahiny tany Zimbaboe teo aloha, ary ny minisitry ny fizahantany sy ny indostrian'ny fandraisam-bahiny, nizara fa mila miombon-kevitra amin'ny protokolota vaovao amin'ny boky volamena momba ny fizahantany izahay. Nandefa taratasy tany amin'ny minisitry ny fizahan-tany izy fa amin'ny alàlan'ny famokarana an-trano dia afaka mitazona ny fizahan-tany velona amin'ny ho avy.
Louis D'Amore, filoha & mpanorina ny Ivon-toerana Iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany (IIPT), nilaza fa nankafiziny ny fitarihan'ny Rebuilding Travel olona tsara miaraka amin'ny hevitra tsara. Nilaza izy fa mampiseho fahaiza-mamorona ny tanora, ary mila manatona azy ireo isika, eny fa na dia amin'ireo anjerimanontolo aza, mba hanampy amin'ny fampivoarana ireo hetsika.
Louis D'Amore, IIPT, New York, Etazonia
Felicity Thomlinson an'ny Typsy monina any Sydney, Aostralia, nizara famelabelarana tamin'ny ny orinasany izay sehatra ianarana an-tserasera hampianarana sy hanampiana ny sehatry ny fandraisam-bahiny manerantany. Nizara izy fa ny orinasany dia manome famandrihana maimaim-poana hatramin'ny 30 septambra amin'ity taona ity satria mino izy ireo fa zava-dehibe ny manohana ny sehatry ny fandraisam-bahiny mandritra io fotoana io. Nilaza i Felicity fa ny fandraisam-bahiny omenay ny hafa no mamaritra antsika. Ireo fampianarana dia misy amin'ny fiteny maro ary raha tsy tanisaina ilay fiteny iray tadiavinao dia amporisihina ianao hifandray aminy mba hahafahan'izy ireo miasa amin'ny fampidirana azy. Aorian'ny fotoana malalaka dia manana safidy ny olona hisoratra anarana amin'ny safidy famandrihana isan-karazany raha misafidy izy ireo.
Felicity Thomlinson avy any Sydney dia manolotra an'i Typsy, Sydney Australia
Ny Hon. Edmund Bartlett, Minisitry ny fizahan-tany Jamaika, nikasa ny handray anjara amin'ity hetsika ity izy, na izany aza, tafiditra tao amin'ny parlemanta izy. Nieritreritra ny hiresaka momba ny Generation-C izy. An ny lahatsoratra momba an'io dia azo vakiana ao eturbonews.com. Te hiresaka momba ny Global Tour Resilience & Crisis Management Center koa izy.
Dr. Taleb Rifai dia nizara ity fampahalalana ity tamin'ny anaran'ny Minisitra: ny ivon-toerana fizahan-tany momba ny fizahan-tany dia natsangan'Andriamatoa Bartlett hamaly ireo krizy ary nanomboka taorian'ny nandravan'ireo rivodoza an'i Karaiba. Misy ambaratonga krizy 5 voafaritra: loza voajanahary, areti-mifindra, fampihorohoroana, loza ara-toekarena ary loza ara-politika. Zavatra telo ataon'ny Ivotoerana dia ny fitazonana tahiry fitehirizana tahiry hanangonana vaovao momba ny krizy, hiasa amin'ny fiomanana ary hiresaka momba ny fanarenana.
Profesora Lloyd Walle, lehiben'ny GTRCM ao amin'ny University of East Indies any Jamaica dia nizara fa tao anatin'ny 2 taona lasa, tetik'asa 15 no natolotry ny Ivotoerana ho an'ireo orinasa tsy miankina, governemanta ary ny sehatry ny fitsaboana. Nanokatra vavahady media sosialy izy ireo izay manome fampahalalana momba ilay virus sy ny fotoana mety.
Prof Lloyd Waller ao amin'ny Ivotoerana momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy ny krizy, Jamaika
Nanohy nitohy hatrany ny fanohanana tamin'ity fihaonana voalohany ity nifandimbiasan'ireo mpandray anjara hiresaka momba ity hetsika Rebuilding Travel ity. Dov Kalmann, tale jeneralin'ny Pita Marketing ao Tel Aviv, Israel dia nilaza fa tsy ny indostria miady ho an'ny fahavelomana ihany, fa ny hitazona ny nofy ho velona ary hanova izany nofy izany ary avy amin'io nofy vaovao io dia afaka mamorona fanantenana. Dov dia maneho an'i Seychelles sy Thailand any Israel
Dov Kalmann an'ny Pita Marketing any Israel
Arwin Sharma avy amin'ny Odyssea Globale Ltd any Malezia dia nizara fa hanaparitaka ny vaovao momba ity fandraisana andraikitra vaovao ity any amin'ny faritry ny Ranomasimbe Indianina.
Arwin Sharma avy amin'ny Odyssea Malaysia dia manazava ny Big Intiative Indian Ocean Initiative
I Ivan Dodig, mpanao gazety, ary mpikambana ao amin'ny mpikambana ao amin'ny Birao Fifandraisana Digital FIJET avy any Bosnia Herzegovina dia nilaza fa ilaina izany amin'izao fotoana ankehitriny izao. Faly izy fa anisan'ny mandray andraikitra ity mpanao gazety ity.
Ivan Dodig mpanao gazety FIJET avy any Bosnia Herzegovina
Daniel Milks, tompon'ny myXOadventures.com - mpandraharaha fizahan-tany any Florida, dia nilaza fa nanao fanamarihana marobe ary nankasitraka ireo hevitra tsara.
Daniel Milks,, myXOAdvenrues, Florida, Etazonia
Giovanna Tosetto, matihanina amin'ny dia avy any avaratr'i Italia dia nanazava ny fiantraikan'ny virus amin'ny orinasany sy ny faritra misy azy.
Ny minisitry ny fizahantany teo aloha Jamel Gamra dia nizara ny fahitany amin'ny fizahantany taorian'ny COVID 19, Tonizia
Ny minisitry ny fizahantany teo aloha Jamel Gamra dia nizara ny fahitany amin'ny fizahantany taorian'ny COVID 19, Tonizia. Fantany ihany koa ny toe-java-misy eo amin'ny sehatry ny sambo fitsangantsanganana.
David Vime, Maestros Hoteleros orinasa Espaniola mitantana hotely any Espana sy Egypt dia nanana ny faminaniany manokana.
Denise Aleong-Thomas, tompona fizahantany kely any Trinidad & Tobago
Denise Aleong-Thomas, tompona fizahantany fizahantany kely any Trinidad & Tobago dia nizara ny ahiahiny.
Vincent Mugaba an'ny Kwezi Outdoors any Oganda
Vincent Mugaba avy any Kwezi Outdoors any Oganda dia niteraka resabe momba ny fifandraisana ao Afrika miaraka amin'ireo manampahaizana miresaka ity olana lehibe ity.
Mazava amin'ny halavany tamin'ity fihaonana virtoaly 2 ora voalohany ity fa ny rehetra dia mangetaheta vaovao, manana hevitra zaraina, ary vonona ny handroso. Nilaza ireo mpandray anjara fa miandrandra fatratra ireo fivoriana ho avy izy ireo.
Juergen Steinmetz dia nangataka tamin'ny rehetra mba hampiditra tenifototra #rebuildingtravel ary hampiely ny teny mba hahafahan'ny maro hanatevin-daharana ao www.panontrip.travel/register
Ny hetsika dia manangana sehatra fifandraisana ao anatiny buzz.travel, sehatra media sosialy vaovao hifandraisan'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany. '
90% amin'ireo orinasa madinidinika dia mety mikatona any Etazonia 10